Winery Frescobaldi iri muTuscany muItari. Bhizinesi remhuri rave kuburitsa yakakwira mhando mhando yewaini mazera akati wandei. Pakazara mhuri ineminda inopfuura 7 yemizambiringa muTuscany. Kunze kweiye akakurumbira Castello Nippozzano naTenuta Castiglioni, mhuri iyi yaivewo naCastello Pomino, Rèmole, Tenuta Perano, Castel Giocondo naTenuta Ammiraglia.
Nhoroondo yewaini yeCastello Nipozzano estate, 35 km kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweFlorence. Ndiyo waini yechinyakare kubva kuTuscany: inochinjika neyakajeka terroir hunhu.
Muna 2015 mazambiringa akakwanisa kuibva zvakakwana nekuda kwenguva refu, inopisa yezhizha uye nemamiriro ekunze akanaka. Yakanga isiri kusvika hafu yechipiri yaKukadzi kuti mwaka wechando wakaomarara wakazoita wakareruka, nemhedzisiro yekuti mizambiringa yakatanga kukura mazuva gumi gare gare. Chitubu chakatarwa panguva chaiyo musi wa10 Kurume. Nguva yemaruva yainyanya kufarirwa nemazuva akapfava ane zuva, akapindirana nekunaya kwemvura kwaive pazasi pevhareji yemakore mashanu apfuura. Zhizha, mwaka wemichero, waive mumwe weanopisa uye wezuva pamakore gumi apfuura. Muna Chikunguru tembiricha dzaive pamusoro pe21 ° C uye pakanga pasina kana mvura. Muvhiki yekutanga yaNyamavhuvhu, kunaya kwakamirirwa kwenguva refu kwakazodonha. Ne kutanga kwematsutso, mhepo, mavara uye hwema zvakachinja zvese kamwechete uye goho rakaitika muna Gumiguru.
Nipozzano 2016 inopenya yakachena yepepuru yakatsvuka. Pamhino yakanyanyisa uye yakaoma. Pakutanga, pane zvakajeka maruva hwema uye mabhuru matsvuku senge raspibheri, bheribheri uye bhuruu, inoteverwa neakashambadza uye zvinonhuwira manotsi tii, nutmeg uye kofi. Mumuromo unozviratidza pachako unodziya, wakapfava uye unoshamisa kutsva, pamwe nehunyanzvi uye hunobata. Tannin ayo akapfava akanyatso kubatanidzwa muchimiro. Kupedzisa kwakareba uye kunopfuurira.
Mhando dzemazambiringa: Sangiovese, mvumo yekuwedzera mhando (Malvasia nera, Colourino, Merlot, Cabernet Sauvignon).
Fermentation: Stainless simbi tangi.
Kunwa tembiricha: 15-18 ° C.
Iyi waini inoenda mushe nenyama yakatsvuka, nyama yakagochwa uye chizi.